Umsindo ngombiko ngenkohlakalo | IOL Isolezwe
Umsindo ngombiko ngenkohlakalo
Isolezwe / 17 August 2012, 12:57pm /
IMEYA yasoThukela District uDudu Mazibuko, ithi kukhona abangase baboshwe maduze nje ngodaba lwamathenda amaloli amanzi eMkhandlwini wayo, adla izigidi nyanga zonke. Isithombe: NINGI MDUNGE
UMBIKO obulindwe ngamehlo abomvu ngenkohlakalo nokukhwabanisa eMkhandlwini uThukela maphakathi neKwaZulu-Natal, ukhishwe maqede wakhungathwa ngomunye umsindo wamaqembu ezombusazwe kulo Mkhandlu. IMeya yalo Mkhandlu, uDudu Mazibuko, izolo ubikele abezindaba ngokuphothulwa kwalo mbiko osuwethuliwe esigungwini esiphezulu naseMkhandlwini wonke ngeledlule. Lolu cwaningo lwajutshwa ngo-2011 wuMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zobuHoli boMdabu KwaZulu-Natal, ukuba lwenziwe yinkampani ezimele iMoloi & Kirby, kulandela uxhaxha lwezinsolo zenkohlakalo ngaphakathi ezikhulwini zakulo Mkhandlu.
Okuphambili kulo mbiko yisinqumo esesidla lo Mkhandlu imali engu-R28.8 million ngonyaka sokuphakela abantu amanzi kusetshenziswa amaloli ezinkampani ezizimele nokudla ngenyanga imali engu-R2.4 million. IMeya uMazibuko ithe umbiko uveza ukuthi kuningi okungahambi kahle ngala maloli kuhlanganisa nokuthi kunezindawo abejutshwa kuzona kodwa angalubhadi.
Esitatimendeni esifundelwe abezindaba, iMeya ithe kukhona abangaphakathi kulo Mkhandlu asebeshushiswa.
“Kade silokhu sibikelwa zikhathi zonke ngokuqhubeka kombiko oveze ukuthi kunenkohlakalo nokukhwabanisa. Lolu phenyo luholele ekuboshweni kwabantu abayisihlanu, abathathu babo abangabasebenzi. Lokhu kwaphinde kwabikwa futhi nguNgqongqoshe uNomusa Dube, esiShayamthetho saKwaZulu-Natal ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yesabelomali ngoJune 30 nonyaka,” kusho isitatimende seMeya.
Siqhube sathi, phakathi kwabathintekayo ngomunye wabaQondisi abakhulu kodwa owesule esikhundleni ngoNovemba wanyakenye kodwa osebhekene namacala obugebengu.
“Lo mbiko uveza ukuthi kunabasebenzi bangaphakathi abanezinkampani ezenza umsebenzi noMkhandlu njengokuqapha okukhokhelwa imali enkulu ngokweqile kunomsebenzi wabo. Kuyavela nokuthi ezinye izinkampani bezibamba umasipala inkunzi ngokungasebenzi kodwa zikhokhelwe,” kuchaza lesi sitatimende.
Isitatimende siqhuba sithi kunezinqumo ezithathwe wuMkhandlu emhlanganweni wango-Agasti 10, 2012, lapho wethulelwa khona lo mbiko wase unquma ukuthi phakathi kokunye, uMnyango wezokubusa ngokuBambisana nezabaHoli boMdabu noMkhandlu balandele izincomo zombiko, kuqashwe inkampani ezimele yomthetho ezolekelela uMkhandlu kulezi zincomo, kwakhiwe uhlelo lokuqhuba izincomo zombiko, uma kwenzeka kunwetshwe izinsuku kwezingu-21 zokuthatha izinyathelo kwabathintekayo.
Kwanqunywa nokuthi wonke amaqembu afuna ukubona umbiko ophelele aye kuMphathi kamasipala futhi awavumelekile ukuthi awuthathe kumbe bawuphindaphinde.
INFP, ebusa ngokubambisana ne-ANC, kulo Mkhandlu, ithi ibingazi ngalesi sithangami futhi azilona iqiniso izisombululo ezishiwo wuMazibuko.
IPhini leMeya, uMnuz Maliyakhe Shelembe, lithe phezu kokuba bebambisene ne-ANC kulo Mkhandlu kodwa bebengazi ukuthi kunesithangami sabezindaba ngalo mbiko.
“Ngiyabona iMeya ithathe ngemizwa yayo kulolu daba. Bekumele sibonisane ngawo ngaphambi kokuya kwabezindaba njengabantu ababambisene. Sesiyaphoqeka ukuba siphikisane ngoba izinto ezisho kwabezindaba zisethusile ngoba akulona iqiniso ukuthi yizinqumo ezithathwe wuMkhandlu kodwa ziqhamuka naye. Ngisho uSomlomo angangifakazela, nasemaminithini oMkhandlu alowo mhlangano akukho lokhu akushoyo. Sasingeke sazi kahle ukuthi uMkhandlu awunamali sithi akuqashwe enye inkampani ezophenya futhi kube sekuphenyiwe,” kusho uShelembe.
Ne-IFP eyiqembu eliphikisayo kulo Mkhandlu ivumelana ne-NFP.
Ithi iMeya uMazibuko ihlanekezele iqiniso ngalezi ziphakamiso ethi ngezoMkhandlu zibe zingadingidwanga emhlanganweni.
UMnuz Nhlanhla Hadebe, we-IFP, uthi sinye isisombululo esathathwa, ngesokuthi uMkhandlu uwemukele umbiko.
“Sithanda ukukubeka kucace siyi-IFP ukuthi umhlangano owawungo-Agasti 10, 2012, okwethulwa kuwona umbiko wathatha isisombululo esisodwa sokuthi uMkhandlu wemukele umbiko. Ngaphambi kokuphela komhlangano, uSomlomo wathi amakhansela afuna ukucubungula umbiko angaya ehhovisi lemenenja kamasipala ebambile,” kusho uHadebe.
Uqhube wathi bayabungabaza ubuchule babaphenyi njengoba ethi kubukeka sengathi bebeziphendlela inkontileka yomunye umsebenzi wokuqhuba izincomo zabo kulo Mkhandlu.
UHadebe uthi uMkhandlu uyehluleka wukuhambisa izidingo kubantu.
“Kusukela ngo-2011 akukho menenja kamasipala, akukho Nhloko yezaManzi, akukho Nhloko yakwaCorporate Services kusukela ngoFebhuwari 2012 kule yakamuva. Uma ubuka lezi zikhundla nobucayi bazo, asingabazi ukuthi kunyakamali u-2011/2012 ngeke siwunuke umbiko ohlanzekile,” kusho uHadebe.
IMeya uMazibuko ithi amakhansela asedlala umdlalo wepolitiki eshibhile ngoba bebekhona kulesi sithangami kodwa abangaphawula lutho futhi bangaphikisa lutho.
“Ngaphambi kokuba sihlangane nabezindaba sihlanganile namakhansela azo zonke izinhlangano ekuseni sase siya nawo kwabezindaba.
Akekho oke waphakamisa ukungenami ngalesi sitatimende ngoba ngisho kwayena uShelembe ubehlezi eduze kwami akashongo lotho,” kusho iMeya uMazibuko.